[Ongorora] Halloween Horror Nights Hollywood - Inonunura Inesimba Horror Punch! - iHorror
musha Varaidzo Nhau [Ongorora] Halloween Horror Nights Hollywood - Inonunura Inesimba Horror Punch!
[Ongorora] Halloween Horror Nights Hollywood - Inonunura Inesimba Horror Punch!
by Ryan T. Cusick October 12, 2021 246 maonero
Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood (HHN) yakaunza ine simba rinotyisa punch gore rino! HHN yagara ichipwanya matarenda ayo uye ichienderera kuve imwe yepamusoro Halloween Haunts muSouth California, uye gore rino zvaive zvisina kudaro. Nekushayikwa kwechiitiko ichi muna 2020 nekuda kwedenda reCovid-19, zvakanzwa kunakidza kufamba mupaki zvekare uye uchiona mwaka weHalloween Haunt.
Mushure mepaki ye2020 hiatus, ndakanga ndisingazive zvekutarisira, uye ndaive nekutya kukuru. Chingave dud? Kana kuti iyo paki ingapinda inopisa uye ichipa chimwe chinhu chitsva zvishoma? Kwemwaka we2021, Halloween Horror Nights yakapa mazamu matanhatu pamwe neyakaipisisa Terror Tram Ride. Dzimwe mazamu dzakadzokororwa kubva makore apfuura asi zvichiri kuendeswa. Kutuka kweBhokisi raPandora, Netflix's Kubata kweHome House, Halloween 4: Kudzoka kwaMichael Myers, Iye Exorcist, Iyo Texas Chainsaw Kuuraya, uye pakupedzisira, wandinoda, Universal Monsters: Mwenga waFrankenstein Anorarama. Iyo paki yakapa matatu ekutyisidzira enzvimbo yepamusoro kuti afambise mazamu, Chainsaw Ranger, Demon City, uye Universal Monsters: Silver Screen Queenz, uko zvikara zvevakadzi zvakasimudzirwa. Iyo paki Grand Pavilion Plaza yakakwenenzverwa kumusoro wenyaya waDe Los Muertos uye yakapa nzvimbo apo vashanyi vanogona kutonhodza uye kutora chinwiwa chevakuru.
Halloween 4: Kudzoka kwaMichael Myers
Kazhinji, nemapoka asingatsungiririki uye nekumirira nguva dzemaawa maviri kusvika matatu kune mamwe mazizi (ini ndinogara ndichikurudzira kumberi kwemutsara), ini handina kuona nguva dzekumirira dzakapfuura maminetsi makumi matanhatu gore rino. Ruzhinji rwakaratidzika kunge runodzorwa, uye pakanga pasina huwandu hwakawanda hwevanhu vakaiswa mupaki, uye yakatengeswa; izvi zvinogona kunge zvakave zvibodzwa zveCovid-2 protocols. Nezve maitiro epaki theme kune protocol, iyo paki yaitaridzika kunge yakangwarira. Iyo theme paki yaida kuti vese vashanyi nevashandi vapfeke mamask avo mumazes uye emukati nzvimbo; zvisinei, ini ndakaona vese vashandi vachitevera mask protocols kunze kwenzvimbo idzi. Vanenge makumi mapfumbamwe muzana evashanyi vandakaona vakapfeka mamask kunze kwenzvimbo idzi zvakanaka. Wese munhu airatidzika kunge ane hunhu hwakanaka pamwe neanovhundutsa; ivo vaive vakafukidzwa zvakare. Ndakafadzwa, uye muThe Mwenga weFrankenstein Lives maze, Mwenga akapfeka chifukidzo chekuvhiya, uye chakaratidza chimiro chakakodzera sebasa rake nyowani saMAD chiremba! Ini ndaifarira kwazvo kunzwisisika kwepaki uye nzira kune inotevera protocol. Kubva muna Gumiguru 3, kana iwe ukaenda kumapaki emitambo muLos Angeles County (kusanganisira Universal), uchafanirwa kuratidza humbowo hwejekiseni kana isina kunaka Covid-19 bvunzo mukati maawa makumi maviri nemaviri usati wapinda mupaki.
Favorite & Least Unofarira Kukwezva
Chikamu changu chandaida chegore rino, maoko pasi, yaive iyo Terror Tram: Iyo Yekupedzisira Kuchenesa. Ini ndanga ndagara ndichinzwa kuti paki yakanga yanyanyisa kuzviisa nayo Vafi vanofamba uye Kuchenesa theming mumakore apfuura. Zvakadaro, yegore rino yeTerror Tram ruzivo rwakafemerwa na The Purge franchise, ine ichangoburwa kuburitswa Iyo Nokusingaperi Kuchenesa, ndiyo yaive yakakwana yekutya kwemanheru. Iyo Terror Tram inoshandisa iyo studio's iconic backlot uye iyo hombe setpiece kubva War of the Worlds. Ichi chiitiko chinoita kuti iwe unzwe senge uri pakati peicho chaicho-chehupenyu kuchenesa kubva kune yakatarwa zvishongedzo, mhepo, uye zvipfeko. Iyo Terror Tram zvakare ine pikicha naNorman Bates pamberi chaipo pePsycho imba, uye kana ukanyatsoteerera, unogona kunzwa amai vachimudana.
Kutya Tram: Iyo Yekupedzisira Kuchenesa.
Kutya Tram: Iyo Yekupedzisira Kuchenesa
Kutya Tram - Iyo Yekupedzisira Kuchenesa
Kana iwe wakamanikidzwa kwenguva uye waifanira kusarudza imwe maze kuti usvetuke gore rino, ini ndingati zvingave zvakadaro The Exorcist. Kana iyo maze yakatanga kuita makore mashoma kumashure, ndinoirangarira isingandipe iyo wow factor; zvaingova zvisina basa. Ino nguva kutenderera, iko kunzwa kwaive kwakafanana. Usandibata zvisirizvo, ndainakidzwa nekutarisa zvidimbu zvakamisikidzwa, uye zvinotora zvimwe zvezvinhu zvinotyisa uye zvine mukurumbira kubva mufirimu rekare, uye rinoita basa rakanakisa rekuratidzira kurwa pakati pezvakanaka nezvakaipa, ini ndaingova kwete "kuinzwa," uye yakanzwa ichishandiswazve sezvawaifamba uchibva pane imwe imba kuenda pane imwe imba.
Zvigadzirwa Zvekudya & Zvakanakira
Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood ine zvakawanda zvekudya uye zvinwiwa zvekusarudza kubva. Vafudzi ve The Texas Chainsaw Urayai maze inogona kudya paLeatherface yakashata yeTexas Mhuri BBQ uye inonaka zvakasiyana siyana zvakasarudzika, zvinotyisa-zvinofuridzirwa zvipiriso zvekudya. Iyo Roadhouse BBQ -style yekudyira inomhanyisa nevanodya maficha akachekwa akadairwa senge:
BBQ Nguruve Mbabvu
BBQ Yakapepetwa Chicken Sandwich yakashanda ne crinkle-cut cut
Texas Chili & Cheese Nachi
22 ″ Monster Hot Imbwa
Dessert inotapira "Ropa" Yekushandisa Minwe ine Poda Yakasviba & Sauce yeStrawberry
MuPaza de Los Muertos, vashanyi vanokokwa kunoshambidza vapenyu uye kupemberera vakafa pabhawa ine sarudzo ine dhiri uye makedheni emabhawa pamwe nemaoko akagadzirwa nemaoko - Marigold Floral Crown, Smoked Margarita, uye Iyo Chamoy Fireball - vakashanda mu festive mwenje-up dehenya mug. Akafuridzirwa neLos Angeles 'tsika dzakasiyana, menyu ku Little Cocina inosanganisira:
Nzombe Birria Tacos ine Red Sauce
Green Chili & Cheese Tamale, yakashanda nesalsa Roja
Yakagochwa Elote Chibage chakapukutirwa neime butter uye chakaputirwa nezvinonhuwira
Horchata Churro Anoruma
Chamoy Pineapple Mapfumo
Mufananidzo Unofambidzana neUniversal Studios Hollywood
Mumumvuri we "Jurassic World-Iyo Ride," vashanyi vanogona kudya nekumwa kuTerror Lab, iyo inoenzanisirwa mushure mekuyedza yebvunzo yekuyedza yatadza, izere ne eerie neon kupenya. Menyu yeLab inoratidza:
French Chingwa Pizzas: imba-yakagadzirwa hoagie roll yakapetwa pamwe nechizi kana pepperoni
Zvinonwiwa Zvinwiwa paaizi (Vodka Mule, Rum Mai Tai, Paloma, Margarita)
Specialty Cocktail, kusanganisira imwe ine zvipembenene lollipop
Mwaka "Halloween Horror Nights" Doro
Pakazara, Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood 2021 yaive chiitiko chisingakanganwike, uye paki yakaita basa rinoshamisa uchingofunga kuti vakabva ku hiatus. Kushaikwa kwenzvimbo dzekutyisidzira ndiko kwega kudonha kwandinogona kuratidza; munguva yakapfuura, Univeral akange akwirisa nzvimbo dzawo dzekutyisidzira, kazhinji aine angangoita mashanu. Ndinoiwana muhukuru hurongwa hwezvinhu; Ndine chokwadi chekuti pakanga paine kusagadzikana kushoma, chikuru, kwaizove neHHN gore rino? Ndine chokwadi chekufara kuti paki yakasarudza kufambira mberi uye kutipa Horror Nights gore rino. Ini ndinowanzo shamisika kuti chii chatingave takawana gore rapfuura, mu2020? Ini zvakare ndakashamisika kuti iyo nzvimbo yeHarry Potter, kusanganisira kukwira, yakavhurwa; munguva yakapfuura, chiitiko ichi chakavharwa panguva yehusiku husiku. Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights izano rakasimba. Kubva pane zvandinoona, kumberi-kwe-iyo-mutsetse kupasa kwanga kusiri kwakakosha sezvazvaive mumakore apfuura.
Norman Bates kunze kwePsycho House - Terror Tram.
Halloween Horror Nights inomhanya pahusiku hwakasarudzwa izvozvi kusvika Gumiguru 31 kuUniversal Studios Hollywood. Unogona kutenga matikiti nekudzvanya pano.
Zvekunakidzwa zvinowedzeredzwa uye zvega zve "Halloween Horror Nights" zvemukati, shanya HollywoodHalloweenHorrorNights.com, Kufanana Halloween Horror usiku - Hollywood iri Facebook; tevera @HorrorNights #UniversalHHN on Instagram, Twitter, uye Snapchat; uye tarisa kutya kunotyisa Halloween Horror Nights YouTube.